XOG: Mukhtaar Roobow oo ku dhow inuu ku dhex geeriyoodo Xabsi ay ku xirtay DF | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA XOG: Mukhtaar Roobow oo ku dhow inuu ku dhex geeriyoodo Xabsi ay...
XOG: Mukhtaar Roobow oo ku dhow inuu ku dhex geeriyoodo Xabsi ay ku xirtay DF
Iyadoo Mukhtaar Roobow Abuu Mansuur uu dowladda Federaalka Soomaaliya u xiran yahay muddo ka badan sanad ayaa waxaa eedeyn loo jeediyay madaxda Dowladda Federaaka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed.
Waxaa dhawaan soo baxayay warar ku saabsan in Wadaadka ka soo baxsaday Al-Shabaab uu ku dhex xanuunsanayo Xabsi guri ay ku heyso Dowladda Federaalka ayaa hadana dhanka kale warar soo gaaray Shabakadda warqaad waxay sheegayaan in xaaladda Mukhtaar Roobow wanaagsaneyn uuna qarka u saaran yahay geeri.
Mid ka mid ah Waxgaradka ku heybta ah Abuu Mansuur oo Baydhabo diidayna in magaciisa warbaahinta loo adeegsado sababo amni dartood ayaa sheegay in Mukhtaar Xaaladiisa aan wanaagsaneyn,islamarkaana ay Dowladda Federaalka dayacday oo xil iska saarin daryeelkiisa.
Wuxuu sheegay in xanuunada qaar ee hayay Wadaadka ka sii dareen,islamarkaana xaaladiisa ay ku dhowdahay geeri, wuxuuna madaxda Dowladda Federaalka ugu baaqay iney si deg deg ah wax ugu qabtaan Xaaladda murugsan uu ku sugan yahay Mukhtaar Roobow Cali Abuu Mansuur oo mudo halsano iyo bar ah u xiran yahay Dowladda.
Waxaa dhowr jeer fashilmay dadaal lagu doonayo in lagu sii daayo Mukhtaar Roobow oo la xiray isagoo isku diyaarinayay doorashadii maamul goboleedka Koonfur Galbeed ka dhacday dabayaaqadii sannadkii 2018-kii.
Yuusuf Xasan Mursal oo ka tirsan Xisbiga Amniga iyo Caddaaladda, oo uu doorashada ku matalayay Mukhtaar, ayaa maamulka uu horkacayo Laftagareen ku eedeeyay iney uga baxeen heshiis isku soo dhawaansho ah oo horseedi lahaa in lasii daayo Roobow.
Wuxuu sheegay in madaxweynaha laga dhowrayay inuu heshiis la saxiixdo siyaasiyiinta garabka Mukhtaar, ka hor inta uusan ka tagin Nairobi, balse taasi aysan dhicin.
Mukhtaar Roobow ayaa xabsiga loo taxaabay bishii Disembar ee sannadkii 2018, xilli uu waqti kooban ka harsanaa doorashadii madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, taasoo uu ka ahaa musharrax saameyn weyn leh.
Xarigiisa ayaa sababay qalalaase ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay, iyadoo lasoo tabiyay in qulqulatooyinkaas ay waxyeello isugu jirta dhimasho iyo dhaawac kasoo gaartay dad rayid ah.